Xaalada Ceerigaabo iyo wararkii ugu dambeeyay – Radio Daljir
Luulyo 28, 2019 8:19 b 0
Xaalada magaalada Ceerigaabo ayaa saaka ah mid degan, waxaana laga dareemayaa magaalada cabsi la xiriirta in markale uu dgaal xoogan uu ka dhex qarxo maamulaka Soomaaliland iyo Jabhadda Kornayl Caare.
Dagaalkii shalay korneel Caare uu ku qaaday duleedka magaalada Ceerigaabo ayaa waxa uu ku qabsaday deegaano istaraatiiji ah oo fariisin u ahaa ciidamada maamulka Soomaaliland ee Soomaalidiidka ah.
Ciidamada Soomaaliland ayaa lagu jabiyay dagaalkii shalay waxaan laga dilay ilaa iyo 6 askari, haka 7 kalena dhaawacooda loo soo qaaday magalada Ceerigaabo.
Magaalooyinka Burco iyo laascaanood ayaa laga dareemay dagaalkii ka dhacay shalay dueedka Ceerigaabo waxaan dagaalka lagu la,yaha ilaa iyo todoba qof iyo xoolahoodii.
Jamhadda ayaa Muuse biixi ku fahantay wadahadalada beenta ah ee uu sheegay in uu la furayo, isagoona hoota ka soo diray ciidamo aad u hubaysan oo uu hogaaminayay abaanduulihii ciidamada ee deegaanka Meydh.
deeaanada ay la wareegeen ciidamada Creere waxaa kamid ah:
1- Mgaalo xeebeeda Ceerigaabo.
2 – Saldhigii ciidamada badda ee Maydh.
3-Waddada isku xirta deegaanada Xiis iyo Meydh.
4- wadada buuralayda Tabca iyo deegaano kale oo muhiim u ahaa mamaulka Soomaaliland.
Wajigii 2aad ee dhismaha waddada bartamaha ee Burtinle oo xariga laga jaray (dhegayso)